ရုရှားအတွက်အခမဲ့ LANGUAGETOOL DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
ဒီစကားရပ်ကျမ်း၏အရေးအသားကိုရည်ညွှန်းသည်, အမှားတွေလုပ်လူ့သဘောသဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချို့စာသားကိုရိုက်ထည့်တဲ့စကားလုံးထဲမှာ typing error တစ်ခုတားဆီးတစ်ခုသို့မဟုတ်ကော်မာလက်လွတ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအစာအရေးအသားပြီးနောက်အမှားများကိုမဆိုမျိုးရှိသမျှတို့သည်ဖြစ်တည်မှုပြန်ဖတ်ခြင်းနှင့်စစျဆေးဖို့ရှိပါတယ်။ စာလုံးပေါင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသူတို့ရှိသမျှသည်တွေအများကြီးမှတ်မိဖို့အတော်လေးခက်ခဲသည်ဖြစ်သောကြောင့်တောင်မှထို့နောက်ကစာရွက်စာတမ်းများ၏အရည်အသွေးအာမခံချက်သည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤရည်မှန်းချက်များအဘို့, အမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များသူတို့ကိုပြင်ပေးဖို့အခွင့်အလမ်းများကိုစာသားအတွက်တိ၏ရှေ့မှောက်တွင်ညွှန်ပြပေးသော, နေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦးကဒီဆောင်းပါးထဲမှာဆွေးနွေးကြမည်သည့် LanguageTool ဖြစ်ပါသည်။
LanguageTool လျင်မြန်စွာအမှားအယွင်းများများအတွက်စာသားစစ်ဆေးအသုံးပြုသူနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ရုရှားစာသားများအပြင်, program ကိုသင်ပင် 40 ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများနှင့်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သငျသညျအလိုအလျှောက်စစ်ဆေးမှုများကို enable သို့မဟုတ်ညာဘက်အချိန်တွင်လုပ်ငန်းစဉ်ကို activate လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရေးသားသည့်အခါအသုံးပြုခဲ့သည်သောဘာသာစကားမသိသောဖြစ်လျှင်, LanguageTool ကကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
သိရန်ကောင်းသော! ပြတင်းပေါက်ထဲမှာကူးယူသေချာပေါက်စာသားစစျဆေးဖို့က clipboard ထံကပေးပို့နှင့် LangvidzhTul setting သင့်လျော်သော select လုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။
အပိုင်း "Options ကို" LanguageTool setting များကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အသုံးပြုသူအမှားအယွင်းများများအတွက်စာသားစစ်ဆေးခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီအဖွင့်ပါသို့မဟုတ် program တစ်ခုထဲသို့ထည့်သွင်းထားတဲ့အချို့စာလုံးပေါင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ၏ကို disable အားဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူထိုသူအချို့ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသတိပြုမိပြီဆိုရင်, အဲဒါကိုကိုယ့်ကိုယ်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
ပံ့ပိုးမှု N-gram ပါ
LanguageTool စာသား၏ပိုကောင်းစိစစ်အတည်ပြုဘို့ N-gram ပါထောက်ခံပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်, ဂျာမန်, ပြင်သစ်နှင့်စပိန်: developer အသုံးပြုသူလေးဘာသာစကားများဆာဗာပြီးသားဖန်တီးထားပါတယ်မေးတယ်။ 8 gigabytes ၏အရွယ်အစားမှာဖြန့်ဖြူး File, ဒါပေမယ့်ဒီ program ကိုကျေးဇူးတင်နောက်ထပ်ပေးထားသောထားသောစာပိုဒ်တိုများ၏အသုံးပြုမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူလုပ်နိုင်သောထို N-ဂရမ်နှင့်အတူသင့်ဆာဗာကို set up ပြုလုပ် LanguageTool သတ်မှတ်နိုင်သည်။
N-ဂရမ် - ဒြပ်စင်များ၏အချို့သောအရေအတွက်တစ်ဦး sequence ကို။ စာလုံးပေါင်းလက်ခံရရှိတဲ့အချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီးစကားလုံးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ရိုးရှင်းတဲ့စကား N-gram ပါစာသား၏ SEO ဆိုသည်မှာ-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ဆောင်နှင့်အချို့သောစကားလုံးသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုသုံးခဲ့အကြိမ်အရေအတွက်ကိုတွက်ချက်။
သိရန်ကောင်းသော! အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် N-gram ပါသုံးစွဲဖို့, သင့်ကွန်ပျူတာမဟုတ်ရင်, အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များလွန်းနှေးကွေးပါလိမ့်မည်, SSD ကို-drive ကိုတပ်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
LangvidzhTul မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းများဖန်တီးမှသာ TXT format နဲ့, ဒါကြောင့်သင်၏အကူအညီဖြင့်ဖန်တီးခဲ့သည့်ဖိုင်အတွက်အမှားအယွင်းများများအတွက်စာသား scan လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဥပမာ, သမ်မာကမျြးအဆိုပါ clipboard ထံသုံးစွဲဖို့ရပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ပါတယ်
LanguageTool ဒေါင်းစာသားကိုစိစစ်။ ဤအတူအသုံးပြုသူအတိုး၏အ morphological ဖွဲ့စည်းပုံကတစ်ဦးချင်းစီကိုအောက်ပါတစ်ခုချင်းစီကိုစကားလုံးများ၏ဖော်ပြချက်နှင့်ပုဒ်ဖြတ်အမှတ်အသားကမ်းလှမ်းတွေ့နိုင်ပါသည်။
ရုရှား interface ကို;
ပံ့ပိုးမှု N-gram ပါ;
အဆိုပြုချက်များ morphological ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ;
အပိုဆောင်း installation ကိုအလုပျအတှကျဂျာဗား 8+ လိုအပ်သည်။
အခွင့်အလမ်းများကိုစာသားတစ်ခုအရည်အသွေးဆန်းစစ်လုပ်ဆောင်ကဖန်ဆင်းသမျှသောအမှားတွေကိုထောက်ပြဖို့ခွင့်ပြု LanguageTool ။ ဒီပရိုဂရမ် 40 ကျော်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ပင် N-gram ပါ၏အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ installer ရဲ့အရွယ်အစားကို 100 MB, အပိုဆောင်းလိုအပ်ချက်ဂျာဗား 8+ တပ်ဆင်ခထက်ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ပါသည်။
အခမဲ့ LanguageTool Download
စာသားထဲမှာအမှားများကိုပြင်ပေးဖို့အစီအစဉ်ကို အွန်လိုင်းစာလုံးပေါင်း Check AfterScan RS ဖိုင်မှတ်တမ်းပြုပြင်ခြင်း
LanguageTool - စာသားထဲမှာအမှားများကိုထောက်ပြနိုင်မယ့်အားကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်, TXT-စာရွက်စာတမ်းနှင့်အတူအလုပ်စာသားနဲ့တခြားအရာ morphological ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
ရေးသားသူ: LanguageTool အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ Daniel Naber
Size: 113 MB အထိ
ဗီဒီယို Watch: How to setup Texstudio to use Language Tool LT, grammar checker (အောက်တိုဘာလ 2019).